ညီနေမင်း: January 2009
Blog ပဲရေးရေး Worldpress ပဲရေးရေးပေါ့ ကိုယ်ပိုင် website လေးတွေမှ ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ အောက်က ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ website လေးတွေမှာ account တစ်ခုစီ လုပ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းချင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်လို့ပေါ့ဗျာ .. လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ တစ်နေရာရာမှာ မမေ့အောင်ရေးထားပေါ့ဗျာ ....
File များကို sharing လုပ်ထားဖို့အတွက်ပါ (Free 5GB)
photo တွေအတွက် အတော်လေးသင့်လျှော်ပါတယ်
@ http://imageshack.us နှင့် http://tinypic.com
အလွယ်ဆုံး ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဒီကောင်လေးကို သွားလိုက်ကြည့်ပါ ..
ကျွန်တော်လဲလုပ်ထားပါတယ် ..... http://own-free-website.com
Posted by ညီနေမင်း at 5:23 AM2comments:
Labels: Download Sites, General ထွေထွေ
ကဲကျွန်တော့်မှာ wordpress နှင့်ပတ်သက် တာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ ဖတ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ download ပဲပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား .. အားလုံးမြန်မာလူမျိုးမှ မြန်မာလို မြန်မာမှုပြုပြီး မြန်မာများဖတ်နိုင်ရန် ရေးသားထား တာပါခင်ဗျာ .. blog ထက်စာရင်တော့ နဲနဲကျယ်ပြန့်တယ်ဗျ .. အချိန်ရရင် ရသလောက် လေ့လာကြပေါ့ဗျာ။
How to install Wordpress ပါ လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ
using wordpress ပါ လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ ..
making-wordpress-blog ပါလိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ
ကဲအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ်လိပ်စာလုပ်ကြည့်ဖို့ပါ တိုက်တွန်းပါတယ် ..
ကျွန်တော်လဲလုပ်ထားပါတယ် .... email - naymin@thurain.co.cc
ကိုယ်ပိုင် ၀ဘ်ဆိုက်အီးမေးလ်လိပ်စာ လုပ်တဲ့နေရာမှာ 000webhost အကောင့်လုပ်ပြီးရင် သူ ip_confirm ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ့အတွက် ရှာနေရမှာစိုးလို့ ကျွန်တော်ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် download လုပ်ထားပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ..
ip_confirm က ဒီမှာ ပါ
လုပ်နည်းလေးလိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ ..
မှတ်ချက် ... မြန်မာဝါ့ဒ်ပရပ်မှ မူရင်းဖိုင်အတိုင်းပြန်လည် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ....
Posted by ညီနေမင်း at 4:49 AM 1 comment:
ဒီကနေ့တော့ စိတ်ကူးနဲနဲပေါက်လာတာနဲ့ ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်းပြောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင် ဆိုက်လေးတစ်ခုကို WordPress နှင့်စမ်း လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ ဟီးဟီးဟီး သူငယ်ချင်းတို့လဲ စမ်းကြည့် စေချင် ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလောက် အသစ်လေးကို လည်ချင်ရင်တော့ http://www.thurain.co.cc ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဒီ www.nyinaymin.co.cc မှာပဲ ဆက်ရေးနေမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် စာဖတ်သူများ စိတ်အနှောက် အယှက်မဖြစ်စေ ချင်တာရယ်။ ဒီနာမည်လေးကို မပြောင်းချင်တာရယ်ကြောင့်ရယ်လဲ ပါပါတယ် ..
Posted by ညီနေမင်း at 12:40 AM No comments:
Labels: Domain name websites, General ထွေထွေ
ကဲ အချိန်တွေ နောက်မကျစေဖို့ ကျွန်တော် နှိုးစက်လေးတစ်လုံးရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကိုလိုချင်တဲ့ အသံမျိုးနဲ့လဲ အသံသွင်းထားလို့ရပါတယ်။
download လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ ...
Posted by ညီနေမင်း at 7:38 PM No comments:
ဒီလင့်လေးဟာ ဘယ်လောက်ပို့ ရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး....။ ဒါကြောင့် ပိုချင်သလောက်ပို့ပေတော့ဗျာစိတ်ကြိုက်ပေါ့...။
ဒီလင့်လေးကိုတော့မည်သည့်နိုင်ငံ က မဆို Singapore ကိုပို့နိုင်ပါတယ်.....။ အကန့်အသတ်မရှိပေါ့ဗျာ....။
ကဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒီဆိုက် လေးကို သွားကြည့်လိုက်ပါ ..
ဒီကောင်လေးကတော့ International အတွက်ပါ ... ကန့်သတ်ချက်တော့ထားထားပါတယ် ... တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ်ပဲ ပို့ခွင့်ရှိပါတယ်.
ကဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုက် လေးကို သွားလိုက်ပါ
Posted by ညီနေမင်း at 2:56 AM No comments:
Now I'm really sick. Thus, I can't creat new posts and I can't repair my blog template. ;-) now I write this post when lie on my bed. Really, I want to write alot of posts. But, now I can't do it. I'm dancing with the medicine and injection. ;-( but don't worry friends. I'm good better. I write this post by my handphone. Thus please understand for me. Best regards, NYINAYMIN
Posted by ညီနေမင်း at 9:20 PM3comments:
Nokia, Sony Ericsson ဖုန်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်
download လုပ်ချင်ရင် ဒီမှာ ပါ ....
(၁) အဲ့ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို ကွန်ပျူတာ (laptop) ထဲကိုဒေါင်းလုပ် အရင်ချထားလိုက်ပါတယ်
(၂) နောက်ပြီးတော့ P1i ဆီကို ကွန်ပျူတာနေ bluetooth နဲကလှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်
ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ sms box ထဲကို AED_S60.jar ဆိုပြီးတန်းရောက်သွားတယ်ဗျ
(၃) အဲ့ဒီလို ဖုန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့ sms လေးကို view ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
jDictionary Mobile ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်
အောက်ဆုံးမှာ Install လုပ်လို့ရတဲ့ bottom လေးရှိတယ်
အဲ့ဒါလေးကို click လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ
Posted by ညီနေမင်း at 6:38 PM No comments:
Labels: Download Sites
ကွန်ပျူတာသမားတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ User Guide စာအုပ်လေး
စာအုပ်လေးကို download လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ .....
Posted by ညီနေမင်း at 6:11 PM 1 comment:
ဖုန်းဖြင့် mobile english-myanmar dictionary install လုပ်နည်းနှင့် myanmar message ပို့နည်း
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တောင်းဆိုလာတာနဲ့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ မတင်ဖြစ်တာလဲပါတယ်။ နေလဲမကောင်းတာနဲ့ ပို့စ်တွေတောင် နောက်ကျနေတယ်ဗျာ. အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတစ်လော ဖုန်းအကြောင်းကိုပဲ မေးကြမြန်းကြနဲ့ဆိုတော့ စိတ်က ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်တာလေးတွေကိုပဲ တင်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီအတွက် ကြေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့လဲ ယူဆပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ မြန်မာ dictionary ထည့်ချင်ကြမှာပေါ့နော် သူငယ်ချင်းတို့ ကျွန်တော်လဲ ထည့်ထားပါတယ်ဗျာ။ ဟဲဟဲ အခုပေးမှာက ၃ရက်ပဲရမှာပါ။ အပိုင်ဝယ်ချင်ရင်တော့ မြန်မာငွေ ၅၀၀၀ သွင်းရပါတယ်. သူကုတ်နံပါတ်ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ သွင်းရမှာက ရန်ကုန်မှာပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းခိုင်းပြီးသွင်းခိုင်းလိုက်တာ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုအတွက် ရင်ထဲမှာပျော်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ကြေနပ်မိပါတယ်။ ကြေနပ်မှုတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော့်ဘလောက်လေးမှာကွန်မန့်တစ်ခုခုရေးပေးခဲ့ပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား။ ကဗျာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျသိလား။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ရှစ်တန်း၊ ကိုးတန်း၊ ၁၀ တန်းကို ဂိုက်လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ ဒီကဗျာလေးကို ကြိုက်မိတာလဲပါတယ်။
အားရှိပါသည် တဲ့ ဟဲဟဲ
အဲလိုပဲဗျ ဘလောက်မှာ ရေးတဲ့သူတိုင်းဟာလဲ စာဖတ်သူဆီက တုန့်ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို မလိုချင်ဘူးဆိုပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ လိုချင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ စာဖတ်သူတွေဘယ်လောက်များများကို့ဘလောက်ကို အားပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ နေ့တိုင်းဘယ်သူတွေ ကွန်မန့် ဘာတွေရေးခဲ့လဲဆိုတာကို ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ ပီတိဖြစ်ကြရတာလဲ ဘလောက်ဂါတွေရဲ့ ပင်ပန်းမှုကို နှစ်သိမ့်ရတဲ့ အားဆေးတစ်မျိုးပဲပေါ့...
Posted by ညီနေမင်း at 7:53 PM4comments:
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြဖို့ တစ်ခုမေ့နေတယ် gtalk ကနေ language ကို ပြောင်းတာလေ
ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပေးလို့ ဒီနေ့သိလိုက်ရတာပါဗျာ .....
en2mm3@mmgeeks.org ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေကို invite လုပ်သလိုမျိုးပဲလုပ်လိုက်ပါ။
သူ့အကောင့်က အမြဲတမ်း မီးစိမ်းလေးပြနေပါလိမ့်မယ်။ သူ့အကောင့်ကိုမြင်ရပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ chatting လိုပဲ တစ်ခုခု ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ရမှာပါပဲ။ အတူတူပါပဲ။ အခုဟာကလဲ ဒီပုံစံအတိုင်းပဲလေ။ ကိုသိချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်။ en2mm@mmgeeks.org ဆိုတဲ့ဖက်ခြမ်းကနေ Auto Answer ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ရဲ့နောက်ကပဲ တစ်ခြား ဘာသာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါ့မယ်။
အရင်တုန်းက ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကိုမရေးတာ မြန်မာအင်္ဂလိပ်မပါသေးလို့ စိတ်သိပ်မ၀င်စားသေးတာလဲပါတယ်ဗျ။ ဒီနေ့မှ မထင်မှတ်ပဲ ရလိုက်တာလေ။
Posted by ညီနေမင်း at 4:30 AM3comments:
Labels: Applications, Speak English အင်္ဂလိပ်စကားပြော
Dial up connection ဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ရအောင် (ထိုင်းနိုင်ငံ)
Dial up connection ဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဦးစွာ အင်တာနက်နာရီတော့ ၀ယ်ထားပြီးသားအဆင်သင့် ရှိနေရပါမယ်။
ဒီလိုမလုပ်ခင် ကျွန်တော်တို့ mobile နှင့်ပတ်သက်တာလေးတွေတော့ လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါ့မယ်။
(၁) cabel connection ဖြင့် dial up ချိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် မိမိသုံးမယ့် mobile နှင့်ပတ်သက်သည့် modem နှင့်သက်ဆိုင်တာလေးများ install လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ Nokia (nokia pc suite) လိုမျိုး mobile ကို modem ခံပြီးသုံးဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာနှင့် mobile ချိတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ driver များ တင်ထားပေးရပါမယ်။
(၂) အဲ့လိုမတင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ မိမိသုံးမည့် ဖုန်းတွင် bluetooth ပါလားအရင်ကြည့်ရပါမယ်။ bluetooth ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ modem မတင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ bluetooth ပါပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမှာ bluetooth မပါပြန်ရင်လဲ ကွန်ပျူတာမှာ bluetooth တစ်ခုဝယ်ပြီး တပ်လိုက်ပါ ဈေးချိုပါတယ်။ ထိုင်းဘတ်နဲ့ဆိုရင် ၃၀၀ ဘတ်လောက်ပဲကုန်မှာပါ။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ရင်တော့ ချိတ်ဖို့အတွက်ပဲ ကျန်တော့တာပေါ့ဗျာ။
ကဲ ဒီလိုလုပ်ရအောင် -
(၁) Start >> settings >> Network Connections ကိုအရင်သွားပါ
(၂) create network connection ကိုသွားပါ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ အောက်က ပုံလေးများအတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
Posted by ညီနေမင်း at 7:53 PM2comments:
Labels: Applications, Phone ဖုန်းနှင့်ဆိုင်သမျှ
Posted by ညီနေမင်း at 8:11 PM6comments:
ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ခေါင်းညိတ်တတ်တဲ့အမေ xxxxxxxx
ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ နာကျင်မှုတွေကို ခါးစီးခံခဲ့တဲ့အမေ xxxxxxxxx
အမြဲတမ်း အိမ်တံခါးလေးကိုစေ့ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အမေ xxxxxxx
ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အမှီလိုက်ဖို့ထက် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အမေ xxxxxxx
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပါစေ
"သားရေမေမေဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ" လို့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြန်ပြောလိမ့်မယ် xxx
ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ အသက်ထွက်သွားလဲ
သေတဲ့အထိ ငါတမ်းတမ်းတတနဲ့ ခေါ်နေဦးမှာက
အမေ !!!!!!!! လို့လေ
Posted by ညီနေမင်း at 7:31 PM2comments:
ထိုင်းဖုန်းဖြင့် ပိုက်ဆံခိုး(အဲဟုတ်ပါဘူး) ပိုက်ဆံပို့ကြမယ်
ကျွန်တော် ညတုန်းက ရေးမလို့ပါပဲဗျာ ဒါပေမယ့် ညတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကူညီပေးနေရတာနဲ့ပဲ မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်းစူးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပိုက်ဆံအရေးတစ်ကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာ။ ကို့ဖုန်းမှာပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုရင်ပို့လို့ရပါတယ်။ 12 call and Dtac တော့ပို့လို့မရပါဘူး ကုမ္ပဏီတူမှရတာပါ။ ကဲကျွန်တော်က 12call သုံးတာဆိုတော့ ဒီအကြောင်းပဲပြောပါ့မယ်။ နောက်ကျမှ Dtac အတွက် ရေးပါဦးမယ်။
ကဲစကြရအောင်ဗျာ ပထမဦးဆုံး *140 ကိုခေါ်လိုက်ပါဗျာ ထိုင်းသူကပြောပါတယ် For english please press 1 ဆိုပြီးပြောပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် 1 ကိုနှိပ်ပါဗျာ။ ပြီးတာနဲ့သူက ဆက်ပြောပါမယ် ငွေလွှဲမယ်ဆိုရင် 1 ကိုနှိပ်ပါလို့ ပြောလိမ့်မယ်။ ကိုက ငွေလွှဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ကိုလွှဲမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောခိုင်းပါတယ်။ ကိုလွှဲမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်လဲ စိတ်မဆိုးဘူးနော် ဟီးဟီး။ ဥပမာ- 0810781844 .. ပြီးတာနဲ့ သူက ၂၀ ပို့မှာဆိုရင် 1 ကိုနှိပ် 50 ပို့မှာဆိုရင်2ကိုနှိပ်၊ 100 ပို့မှာဆိုရင်3ကိုနှိပ်လို့ပြောပါမယ်။ ကိုပို့ချင်သလောက် ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့သူက ဆက်မေးပါမယ်။ သေချာလား သေချာတယ်ဆိုရင် 1 ကိုနှိပ်လို့ပြောပါမယ့်။ သေချာတယ် ငွေလွှဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 1 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကဲပြီးပါပြီဗျာ။
Posted by ညီနေမင်း at 7:16 PM No comments:
Posted by ညီနေမင်း at 6:19 AM2comments:
Labels: Funny ဟာသ
ရုတ်တရတ် လူများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားပြန်သည်၊ ကိုကြူ လည်း ထွက် ပြေး လွတ်မြောက်သွားပြန်သည်။
Posted by ညီနေမင်း at 6:18 AM No comments:
ဒီတစ်ခါ တော့ ကို ဖြိုး အိပ်ပျော်နေသော မနီ ကို ဘော့ ပင်နှင့် နာနာ ထိုး၍ သတိပေးလိုက်သည်။မနီ အတော် နာ သွား သည်။ထို့ကြောင့် အိပ် ယာ မှ နိုး လာ သဖြင့် ရုတ်တရတ် ထလိုက် ကာ
မနီ။ ။ နောက်တစ် ခါ ငါ့ ကို ထပ် ထိုး ရဲ ထိုးကြည့် ၊ နင့် ဟာ ကို ထက်ပိုင်း ချိုးပစ်မယ်
ဆရာမခမျာ ဘုမသိ ဘ မသိ ဖြင့် သတိလစ် သွား ရှာသည်။
Posted by ညီနေမင်း at 6:17 AM3comments:
Internet နာရီဝယ်ကြရအောင် (ထိုင်းနိုင်ငံဖုန်းများအတွက်သာ)
အခုကျွန်တော်ပြောတာက 12 call (GSM) ဖုန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ xxxxxx
ကဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ အင်တာနက်နာရီ ၀ယ်တာလေးကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
အဓိကကတော့ ကျွန်တော် အနီရောင်ပြထားတဲ့ ဂဏာန်းလေးတွေကို မှတ်ထားပါ။ သူ့အစဉ်အတိုင်းနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ station ကိုမခေါ်ပဲနဲ့ Auto လုပ်တာပါ။ station နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ပထမတစ်ချက်က ပိုက်ဆံအပိုကုန်မယ်။ နှစ်အချက်ကတော့ စောင့်နေရမယ် သူပို့လာမယ့် အကြောင်းကြားစာ(message)ကိုပေါ့။
(၁) *138 ကိုခေါ်လိုက်ပါ .. ခေါ်တာနဲ့ သူကမေးပါတယ် for english please press 1 လို့ပြောတာနဲ့ နံပါတ် " 1" ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(၂) ပြီးတာနဲ့ သူကဆက်ပြောပါမယ် mobile internet ကို လိုချင်ရင် ၂ ကိုနှိပ်ပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ''2'' ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(၃) ပြီးတာနဲ့ ပြောမှာက အင်တာနက်သုံးမယ့် ရက်ကိုမေးပါလိမ့်မယ် လအလိုက်ယူမှာလား၊ ၃၀ ရက်ကို တစ်ခါယူမှာလား၊ ဘာညာနဲ့မေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါ ကျွန်တော်တို့ ''1'' ကိုနှိပ်ပြီး လအလိုက်ယူမှာပါ။
(၄) ပြီးတာနဲ့ သူမေးပါလိမ့်မယ် နာရီကို ၂ နာရီလား(၁ ကိုနှိပ်)၊ ၅ နာရီလား(၂ ကိုနှိပ်)၊ ၂၀ နာရီလား(၃ကိုနှိပ်)၊ ၅၀ နာရီလား(၄ကိုနှိပ်)၊ ၁၀၀နာရီလား(၅ကိုနှိပ်)၊ unlimited လား(၆ကိုနှိပ်)၊ ဆိုတာကိုမေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုလိုချင်တာလေးကို နှိပ်ပါ။ ကျွန်တော်က နာရီ ၂၀ ကိုယူမှာဆိုတော့ နံပါတ် ''3'' (၁၀၇ဘတ်)ကိုနှိပ်ပါမယ်။
(၅) သေချာလား သေချာတယ်ဆိုရင် ၁ ကိုနှိပ်လို့မေးပါလိမ့်မယ်။ ''1'' ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(၆) နောက်တစ်ခါထပ်မေးပါတယ်။ သေချာလား သေချာပြီဆိုရင် ၁ ကိုနှိပ်ပါလို့မေးရင် ''1'' ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
Station က ချက်ခြင်းပဲ Message ပို့ပါလိမ့်မယ်။ မင်းစပြီးသုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့
ကဲ စပြီးတော့ အင်တာနက်ကို သုံးလို့ရသွားပါပြီ။
Posted by ညီနေမင်း at 10:50 AM 1 comment:
ထိုင်းဖုန်းတွေ GSM တွေအတွက် Free call လုပ်ပြီးခေါ်ကြရအောင်ဗျာ
Free call (Day/Night) လုပ်ချင်တဲ့သူများအတွက် ကျွန်တော်ရည်စူးတာပါ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဘာတွေထူးခြားနေတာလဲ ဘယ်လို service တွေပေးနေတယ်ဆိုတာကို မသိကြဘူးဗျ။ ကဲပြောနေကြပါတယ်ဗျာ။ နေ့ဖရီးကောဆိုရင် တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် GSM ဆိုရင် GSM ချင်းပဲ ဖရီးရမှာနော်။ နှစ်ချိန်ရှိတယ် မနက်(၅)ရီကနေ၊ ညနေ (၅)နာရီအထိက တစ်မျိုး၊ ည(၁၀)နာရီကနေ၊ မနက်(၁၀)နာရီအထိက တစ်မျိုး နှစ်မျိုှးရှိပါတယ်ဗျာ။ နေ့ဖရီးကောကိုလုပ်ချင်ရင် တစ်လကိုမှ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁၉၉)ဘတ်ကုန်ပါတယ်။ ညဖရီးကောကတော့ (၁၅၉)ဘတ်ကုန်ပါတယ်။ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့..
နေ့ - *777*1# ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံတော့ ကြိုထည့်ထားရမယ်နော်
ည- *777*2# ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
Posted by ညီနေမင်း at 9:45 AM No comments:
ကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်လှစွာသောအဘွားဆုံးသွားတာ နှစ်နှစ်ကျော်သွားပါပြီ..
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း အဘွားရှိနေတယ်လေ.
ညတိုင်း ၁၀ တန်းအောင်တဲ့အချိန်အထိ လာပြီးတော့ ပုံပြင်ပြောပြတုန်း၊ ပြီးတော့ အိပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘုရားစာတွေ ရွတ်ပြနေတုန်းပါ။ ကျွန်တော်အိပ်မှ အိပ်ယာဝင်တတ်တဲ့ အဖွားကို အမြဲတမ်း ရင်ထဲမှာ တမ်းတနေမိတယ် ဘွားရေ။
မနက်ကျရင် အဘွားဘုရားရှိခိုးတာ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကို အမြဲတမ်း အိပ်ယာထဲကနေ နားထောင်ပြီးမှ အိပ်ယာကထတတ်တဲ့ မြေးတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့် အခုတော့ ဒီကြည်နူးမှုတွေကို မျက်ကွယ်ပြုရင်း ချောက်ကပ်ကပ် နံနက်ခင်းတိုင်းကို ဖြတ်ကျော်လာတာ နှစ်နှစ်ကျော်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ ...
ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကနေ အပြန် Big Bag ဆိုထားတဲ့ အဖိုးကြီးလဲ Rap၊ အဘွားကြီးလဲ Rap၊ မွေးကင်းစ အာဗြဲလေးလဲ Rap ဆိုတဲ့ သီချင်းခွေကို ၀ယ်လာပြီး ကြိုက်လွန်းလို့ အိမ်မှာနားထောင်မိတဲ့တစ်ခဏ..
ဘွားဘွားတစ်ယောက် ဥပုသ်ဆောက်ပြီးအပြန် ပုတီးစိပ်နေတုန်းပေါူ့။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အောင်နေစိုးလဲရောက်လာတယ်။
သီချင်းခွေလေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ ပေးနားထောင်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်ကလဲ ဒီ Rap သီချင်းကိုပဲ နားထောင်တယ်။
တစ်ခေါက်ကနေ နှစ်ခေါက်ပေါ့။ မကြာပါဘူး ဘွားဘွား တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ ရောက်လာရော။
ဘွားဘွား။ ။ မြေးကြီး မင်းတို့ ဖွင့်နေတဲ့ ဒီဝက်သီချင်းကို ပိတ်မှာလား အဘွားပိတ်ပေးရမှာလား။
ဘာလဲ? တစ်ခွေလုံး ၀က်တွေချည်းပဲ။ ဘာသီချင်းတွေလဲ မင်းတို့ဟာက။ ဒီမှာ ပုတီးစိပ်မလို့ဟာ။ ဒီဝက်/၀က်ဆိုတာချည်းပဲ ခဏခဏကြားနေရတယ်။ အခုပိတ်တော့တဲ့။
Posted by ညီနေမင်း at 11:22 PM 1 comment:
မင်းရဲ့ လောင်မြိုက်နေတဲ့ မောဟတွေနဲ့
မီးလောင်တိုက် မသွင်းလိုက်ပါနဲ့ xxxxx
ယိုင်နဲ့နေပေမယ့် ခိုင်မြဲနေဦးမှာပါ xxxxx
Posted by ညီနေမင်း at 11:08 PM 1 comment:
Labels: Poems ကဗျာများ
လေးလံနေတဲ့ မျက်ခွံတွေကို ပင့်တင်ရင်း
မင်းအတွက်ဆို အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါတဲ့ xxxxxxxx
ခေါင်းတစ်ခုလုံး ကွဲထွက်တော့မတတ် ခံစားနေရတယ်
အစွန်းရောက်တဲ့ ထိရောက်မှုတစ်ချို့ကို xxxxxxx
ဘယ်တော့မှ ဒီမှုန်ဝါးဝါး ပီချီကားကို
Posted by ညီနေမင်း at 10:19 AM3comments:
window + Start -> run -> gpedit.msc
အဲဒီမှာ Group policy ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကနေ Local Computer Policy -> User Configuration -> Desktop မှ Remove Recycle Bin icon from desktop(double click)>> setting ထဲကနေ Enabled ကို ရွှေးပြီး အိုကေ ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ ပြီးရင်တော့ desktop ကို refresh တစ်ချက်လောက်ပေးလိုက်ပါ။ အမှိုက်ပုံးကြီး ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်က Recycle bin ကို ဥပမာထား၍ အစမ်းဖျောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ကျန်တဲ့ icon လေးများကိုလည်း စိတ်ကူးရှိသလို ဖျောက်နိုင်ပါတယ်။
Drive များ ဖျောက်နည်း
၀င်းဒိုးမှာပါတဲ့ c ,d,eစတဲ့ drive တွေကို ဖျောက်ထားလို့ ရပါတယ်။ recycle bin ဖျောက်တုန်းကလိုပဲ Group policy ထဲဝင်ပြီး User Configuration >> Administrative Templates >> Windows Explorer ကနေ Hide these specified drives in My Computer ကို double click နှိပ်ပြီး မိမိ ဖျောက်ထားချင်တဲ့ drive တွကို ရွှေးပြီး ဖျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေလည်း ဆက်ပြီး ဥာဏ်ရှိသလို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by ညီနေမင်း at 7:39 AM No comments:
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ...
လင့်တွေကို "ဒီမှာ" ဆိုပြီးတော့ ညွှန်းတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ ... ကိုကြိုက်တာကို Select ပေးပြီးတော့ ညွှန်းတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ . ကဲစမ်းကြည့်ရအောင်
ပထမဆုံး Posting>> Create>> Edit Html ကိုရောက်ပြီဆိုရင်
Example .. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ညီနေမင်း ဟာဆိုရင် တော်တော်လေးကို ချစ်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်..
မယုံဘူးဆိုရင်တော့ "ဒီ" ဆိုက်လေးကို သွားကြည့်လိုက်ပါလား ...
အဲ့ဒီ့နေရာမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ "ဒီ" ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကို selection ပေးလိုက်ပါ ..
အဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း insert link ကလေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ.
အပေါ်ကပြထားတဲ့အတိုင်း box လေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လင့်လေးကို ဒီ box လေးထဲမှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.
ကဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုညွှန်းချင်တဲ့ လင့်လေးကို ချိတ်ပေးလို့ရသွားပါပြီ ..
Posted by ညီနေမင်း at 7:16 AM2comments:
ဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာ ပါ
Posted by ညီနေမင်း at 10:34 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးကို အမြဲသတိရနေတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်လဲချစ်တယ် အားလဲအားကျတယ်ဗျာ။ အားလုံးအတွက်ကိုအနစ်နာခံပြီးတော့ သူ့ရဲ့သားသမီးပြည်သူတွေကို အမြဲချစ်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ ယုံကြည်မှုတွေ လွန်ကဲခဲ့လို့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုအဆုံးအရှုံးခံလိုက်ရတဲ့ ဖခင်ကြီးကို အမြဲတမ်းသတိ ရနေကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းတာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒီစကားဟာနိုင်ငံရေးစကားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ၀မ်းနည်းမှုတစ်ခုမျှရယ်ပါ။ ဟိုးအရင်တုန်းက နေရာတိုင်း ဌာနတိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို ဂုဏ်သရေ ရှိရှိချိတ်ခဲ့ကြ ပေမယ့် အခုတော့ ဒါတွေတောင် သိပ်ပြီးတော့မမြင်ရတော့ဘူးဗျာ။ ကျောင်းတွေမှာလဲ မတွေ့ရတော့ဘူး ကြာလာရင် နောင်လာ နောင်သားတွေ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုတောင်မှ ပြဖို့အခက်အခဲဖြစ်ကုန်မလား မသိဘူးဗျာ။
အားလုံးထဲကတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုတာကို မေ့ပျောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို ကျွန်တော်အားကျပါတယ်။ ရေးချင်တာတွေများနေပေမယ့် အချိန်က သိပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တော်တော်များများရဲ့ အသုံးပြုပုံလေးတွေကို အသေးစိတ်ကျကျ တင်သွားမှာပါ။ တောင်းဆိုချင်တာများရှိရင် cbox မှာတောင်းဆိုခဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Posted by ညီနေမင်း at 9:54 PM 1 comment:
ကျွန်တော် ဒီသတင်းကိုရှာနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီဗျာ .. စာနဲ့ပဲလဲမရိုက်ချင်ဘူး. အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်ထင်တာပဲ .. သူ့နေရာမှာ ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။ တော်တော်လေးကို ခံစားရခက်မယ့်အဖြစ်မျိုးပဲ ဘ၀တစ်ခုလုံး လူတောထဲတိုးလို့မရတော့တဲ့အဖြစ်လေ။ ကမ္ဘာကသူ့ကို ထူးဆန်းရောဂါတစ်ခု အဖြစ်လေ့လာနေကြဆဲဖြစ်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သော်လည်း ပိုမိုပြီးများပြားလာသည်ကလွဲပြီး ဘာတစ်ခုမှ ထူးခြားမလာခဲ့ပါဘူး။
download လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ
Posted by ညီနေမင်း at 2:37 AM No comments:
Labels: News ထူးဆန်းသတင်း
ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားတဲ့ ၀ိဥာဉ် ဗွီဒီယိုများကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းများ အပျင်းပြေကြည့်စေချင်လို့ပါ ..
Posted by ညီနေမင်း at 1:47 AM 1 comment:
Labels: Ghost ၀ိဥာဉ်
(၀ိဥာဉ်)အကြောင်းလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်. ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးကို စဉ်းစား မိလိုက်လို့ပါ. သူငယ်ချင်းများနှင့်(၀ိဥာဉ်)ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ ရှစ်တန်း ကျောင်းသားဘ၀က အဖြစ်အပျက်လေးကို သွားသတိရမိတယ်.လူငယ်ဘ၀ဆိုတော့ လက်တည့်စမ်းချင်တာလဲ တစ်ပိုင်းပါ ပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော်ပြောတာ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ သူငယ်ချင်းများ မယုံရင်ဖြင့် စမ်းကြည့်ကြပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား
ဒီတစ်ပတ် ကျောင်းပိတ်ရက်(စနေနေ့)"ညီညီ ငါတို့ဒီနေ့ည ၀ိဥာဉ်ခေါ်ကြရအောင်ကွာ"
ပြောလိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ ကျွန်တော်ကျိတ်ပြီး ရယ်လိုက်မိတယ်။
"မင်းကိုမင်းများဘာ ထင်နေလဲအောင်နေစိုး၊ အထက်လမ်းလိုလို အောက်လမ်းလိုလို ဆရာကြီးများအောက်မေ့နေလား"
ကျွန်တော်လဲ စိတ်ထဲရှိတာကို ခရားရေလွှတ် ပြောလဲပြော အပြစ်လဲတင်လိုက်သည်။
"ဟ ငါကတစ်ကယ်ပြောနေတာ လဒရ.. ၈ တန်းကျောင်းသားဟောင်း ကိုဖြိုးလဲပါမယ်ကွ သိလား"
ရုတ်တရက် ကျွန်တော်အံ့သြသွားရင်း ခဏတာ မှင်တက်မိသွားမိတယ်။
အဲ ည(၈)နာရီထိုးတာနဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် စုပြီးဝယ်ထားတဲ့ တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးမှာ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်း တွေဆုံနေကြပြီ။ အားလုံးက စားလဲစားပြီးကြပြီဆိုတော့ တီဗွီဂိမ်းဆော့တဲ့သူကဆော့၊ စာအုပ်ဖတ်တဲ့သူကဖတ်ပေါ့။ "ဟေ့ကောင် အာင်နေစိုး၊ ကိုဖြိုးလဲမလာသေးပါလားကွ" ချမ်းဇော်က ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ ရုတ်တရက်ထမေးလိုက်သည်။ "ဟ လာမှာပေါ့ဟ အခုမှ (၈)နာရီပဲခွဲသေးတာကို မင်းကလဲ စိတ်စောမနေနဲ့ဦး" "သူလဲ နဲနဲပါးပါး ဖန်ငွေလေးများ ရလာအောင် သူ့မားသားကြီးနားမှာ ကပ်ချွဲနေမှာပေါ့ကွ" လို့ အောင်နေစိုးက စာအုပ်ဖတ်ရင်း ထဟောက်လိုက်ကာမှ ချမ်းဇော်တစ်ယောက်ငြိမ်ကျသွားတယ်။ဟောပြောရင်းဆိုရင် လာပါပြီဗျာ" "အသက်ရှည်ဦးမယ် ကိုဖြိုးကတော့"
ကဲမင်းတို့သုံးယောက်နဲ့ဆိုရင် လူစုံတယ်ဟေ့ကောင်ရေ.. လတ်တလောတော့ အခုငါဝယ်လာတဲ့ အရက်ကို နဲနဲလောက်စီ အရင်ဆုံးသောက်လိုက်ဦး။ သွေးပူသွားအောင်သောက်လိုက်၊ မဟုတ်ရင်မင်းတို့ကြောက်နေကြဦးမယ်။ ပြီးတာနဲ့ စကြတာပေါ့ကွာ။ အမြည်းကလဲကောင်းမှကောင်း ကြက်ကြော်နဲ့အဆင်ကို ပြေနေတာပဲ" ပြောလဲပြော သူကိုယ်တိုင်လဲ ချနေသော ကိုဖြိုးကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသည်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက အရက်တော့မသောက်တတ် ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့ သူငယ်ချင်းတွေဆုံကြပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ ဘီယာသွားသောက်တတ်ကြသည်။ ဒါကလဲ ဆယ့်ခါမှ တစ်ခါရယ်ပါ။ အားလုံး တစ်ယောက် ၂ ခွက်လောက်ချလိုက်တာနဲ့ လူက နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်သွားသည်။
"ကဲ မင်းတို့ အဲ့ဒီ့စားပွဲခုံကိုယူလာခဲ့၊ ထမင်းတော့စားဖူးတယ်မို့လား ဒီစားပွဲပေါ်မှာ"
"ဟာစားဖူးတယ်လေ တစ်ခါတစ်လေ စားပွဲခုံကြီးမှာမစားချင်ရင် ဒီကောင်လေးနဲ့စားနေတာပဲကို" "အေးပြီးတာပဲ အဲ့စားပွဲကို မ လာခဲ့" ကျွန်တော်တို့လဲ မယောင်မလည်နဲ့ စားပွဲခုံကြီးမသွားလိုက်သည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ 12 နာရီထိုးပြီးခါစအချိန်၊ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်တော့ဘယ်လိုနေသည်မသိ၊ ကျွန်တော့် ဆံပင်များကင် ထောင်ချင်ချင်ဖြစ်လာသည်။ လကလဲ ခဏလေးသာလာလိုက်၊ တိမ်ကဖုံးလိုက်နှင့် တူတူပုန်းတန်းကစားနေသလားအောက်မေ့ရသည်။
"စားပွဲခုံရဲ့ခြေထောက်တွေကို အရှေ့။အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာမှာရှိနေအောင်ထား""အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ စီးထားတဲ့ ဖိနပ်ကို တောင်နဲ့မြောက်မှာ ရှိတဲ့ စားပွဲခုံရဲ့ ခြေထောက်အောက်မှာ တစ်ခုက ပက်လက်၊ နောက်တစ်ခုက မှောက်ခုံ ထားလိုက်" ဟုတ်ကဲ့ မကြောက်ဖူးလို့ ခြေကန်ငြင်းနေတဲ့ ချမ်းဇော်တစ်ယောက် စကားသံက တုန်ချင်ချင်နဲ့၊ သူကစကားသံတင်တုန်တာ ကျွန်တော်က ဒူးတွေပါတုန်နေတယ်" တစ်ယောက်လက်သန်းကို ကျန်တဲ့သူရဲ့လက်သန်းနဲ့ထိနေတာဆိုတော့ သူတို့လက်တွေလဲအေးစက်နေတာပဲ" ကြောက်စိတ်ကြောင့်လား၊ အအေးဓါတ်ကြောင့်လားတော့ ဝေခွဲချိန်မရလိုက် "ကဲမင်းတို့သုံးယောက် လက်ကိုကားပြီးတော့ သုံးယောက်စားပွဲခုံပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစံဖြစ်အောင်ဝိုင်း" " တစ်ယောက်လက်သန်းကိုနောက်တစ်ယောက်ရဲ့ လက်သန်းနဲ့ထိနေပါစေ" "နေဦးငါသွားခေါ်ဦးမယ်ကွ" သူတစ်ယောက်တည်းထွက်သွားလိုက်ပြီး ၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူပြန်လာသည်။ ရပြီဟေ့ ပါလာပြီထင်တာပဲ" လို့ ပြောရင် သစ်ရွက်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကို လက်နဲ့ကိုင်လာခဲ့သည်။ သစ်ကိုင်းလေးက တစ်ထွာတောင်မရှိ။
သစ်ရွက်ကတော့ ရတဲ့သစ်ရွက် ခူးလို့ရပါတယ်" "တစ်မာရွက်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့"
"ကဲမင်းတို့ဝိုင်းထားတဲ့ လက်ကိုနည်းနည်းလေး ကားလိုက် သစ်ရွက်ဝင်လို့ရအောင်လို့"
"ဒီလောက်ဆိုရင် ရပြီလား ကိုဖြိုး"
"လက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့" "ငါမေးကြည့်ဦးမယ် ပါလာ/မပါလာကို"
"ကဲ တစ္ဆေ၊ သူရဲ၊ သင်းကွဲ၊ ပိတ္တာနှင့် တစ်ခြား ၀ိဥာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ဒီသစ်ကိုင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် ခုံကိုလှုပ်ပြပါ" "လှုပ်ပြပါ" "သိသိသာသာကြီး လှုပ်ပြပါ။
ဘေးနားမှာ လက်ညိုးထိုးရင်းနဲ့ ပြောနေသော ကိုဖြိုးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ရယ်ချင်နေမိသည်။
သူ့ကိုသူများ ဗိုလ်ချုပ်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ အမိန့်တွေဘာတွေပေးနေပါလား ဆိုပြီးတော့ပေါ့ ..
ကျန်တဲ့ အောင်နေစိုးဆိုရင် တစ်ခွိခွိနဲ့ကို ရယ်တာ အသံပါထွက်သွားတယ် ..
ဒါပေမယ့် ကိုဖြိုးက သိပ်ပြီးဂရုမစိုက် သူကြည့်နေသည်က စားပွဲခုံပေါ်က သစ်ခက်ကလေးကို
"ကဲရောက်လာပြီဆိုရင် သိသိသာသာကြီးကို လှုပ်ပြပါ"
ဒုံး ဒုံး ဒုံး
"သိသိသာသာကို လှုပ်ပြလိုက်စမ်းပါ" "ဒုံးဒုံးဒုံး ဒုံးဒုံးဒုံး ဒုံးဒုံးဒုံး"
ကျွန်တော် လက်မှ အမွေးနုလေးများ ထောင်ထကုန်သည်။ လက်များပင်တုန်လာသည်။
"ကဲမင်းတို့ ကြိုက်တာမေးတော့" "ငါအရင်မေးကြည့်မယ်ကွာ"
"ကဲအခုရောက်နေတာ တစ္ဆေဆိုရင် ရှေ့ဘက်ကိုလှုပ်၊ သူရဲဆိုရင် အနောက်ဖက်ကိုလှုပ်"
"ဒုံး" အရှေ့ဖက်မှ ခုံကျသံကြားလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော် ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါ။
"ကဲ အခုရောက်နေတဲ့ သူရဲ(မင်း)ဟာ ဘာ့ကြောင့်မို့လို့ သေရတာလဲ"
"အစိမ်းသေလား" "ရိုးရိုး ဖျားနာတာလား"
"အစိမ်းသေဆိုရင် ရှေ့ဖက်ခြမ်းကိုလှုပ်" "ရိုးရိုးပဲသေတာပါဆိုရင် အနောက်ဖက်ခြမ်းကို လှုပ်"
"ဒုံး" အရှေ့ဖက်ခြမ်းမှ ခုံကျသံကြားလိုက်ရပြီးသည်နှင့် ကျွန်တော် ထပြေးချင်စိတ်ဝင်လာသည်။
ဒါကို ကိုဖြိုးကသိနေတယ် ထင်သည်။ "မင်းတို့နော် ထွက်မပြေးကြနဲ့" "သူတို့က မင်းတို့လက်တွေမှာ ခိုကပ်ပြီး ပါသွားတတ်တယ်"
ဟိုက်သေရော အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးများ အဝေးသို့ လွှင့်စင်သွားသည်။
"ကဲမေးချင်ရာမေးလေ" ဆိုတာနဲ့ အောင်နေစိုးက စပြီးသူ့ဆော်အကြောင်းမေးသည်။
"ကဲဒါဆိုရင် ငါမေးမယ်ကွာ" "မင်းက အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ"
"မင်းအသက်ကို ငါတို့အတိအကျ မသိချင်ဘူး" "ခုံတစ်ချက်ကို ဆယ်ဂဏန်းနှင့် မင်းခုံကိုခေါက်ပြ"
"ဒုံး ဒုံး ဒုံး ဒုံး" "လေးဆယ်တော့ဟုတ်ပါပြီ လေးဆယ်နဲ့ဘယ်လောက်လဲ ခုံကိုမင်းပိုနေတဲ့ အသက်ကို ခေါက်ပြ"
ဆိုတာနဲ့ပဲ ခုံကို4ချက်ပြန်ခေါက်ပြတယ်"
ကျွန်တော်လဲ အတော်လေးကို အံ့လဲ အံ့သြ၊ ကြောက်ကလဲကြောက်ပေါ့။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အစောနက ကိုဖြိုးတိုက်တဲ့ အရက်၂ ခွက်သာမသောက်မိခဲ့လျှင် နေရာမှာတင် လန့်သွားနိုင်တယ်
အဲ့ဒီ့အချိန်အောင်နေစိုးက ထဖောက်လာတယ်။ေ"တ်ာပြီကွာ ငါပြန်တော့မယ် မင်းတို့နဲ့ ဆက်မနေရဲတော့ဘူး"
ဒီကောင် မပြောမဆိုနှင့်ထပြီးပြန်မယ်လုပ်သည်နှင့် ကိုဖြိုးက "မင်းမပြန်သေးနဲ့ဦး ငါမေးကြည့်ပြီးမှပြန်"
ကဲအခုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ သူရဲရေ မင်းအခု ခုံပေါ်မှာရှိသေးလား။ ရှိသေးရင် ခုံကိုလှုပ်ပြ။
တုတ်တုတ်မျှပင် မလှုပ်၊ "ဟာ ခုံပေါ်မှာမရှိရင် ဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဟ" လုပ်ပါဦး
"ကဲဒါဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လက်မှာကပ်နေတာလား" ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ခုံလှုပ်ပြ
ကဲညီညီ့လက်မှာဆိုရင် လှုပ်ပြ၊ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်
ချမ်းဇော်လက်မှာဆိုရင် လှုပ်ပြ၊ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်
"ဒုံးဒုံး" "အောင်မယ်လေး အမေရေလုပ်ပါဦးဗျ" "ကိုဖြိုးလုပ်ပေးပါဦး ကျွန်တော့်လက်မှာ လာကပ်နေတယ်တဲ့"
နေဦးငါပြန်ပို့ပေးလိုက်ဦးမယ်။ ကဲသူရဲဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးရေ မင်းပျော်တယ်မဟုတ်လား။
"ပျော်တယ်ဆိုရင် ခုံလှုပ်ပြ" "ဒုံးဒုံး"
ကဲ မင်းကိုငါတို့ ပြန်ပို့ပေးမယ်ကွာ၊ ကဲသစ်ခက်ပေါ်ကိုပြန်တက်ကွာ။
"ဒုံးဒုံး"ကဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ငါဒီသစ်ခက်ကို ခေါ်လာတဲ့နေရာကို ပြန်သွားထားလိုက်ဥိးမယာ်။
လက်နဲနဲချဲထားလိုက်။ ငါယူသွားတော့မယ်။ သူ့နောက်က ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားလိုက်သည်။
"ကဲမင်းလဲ ပျော်ပါးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ မင်းသွားချင်ရာသွားလို့ရပြီ။
"ငါတို့ကို ဘယ်တော့မှ လာမနှောက်ယှက်နဲ့တော့ကွာ။ ဟုတ်ပြီလား"လို့ပြောပြီး သစ်ကိုင်းလေးကိုအဝေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
"ကိုဖြိုး ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်လို့ဗျာ ရမလား"
"မေးပါ"ရပါတယ်" ၀ိဥာဉ်ကို သစ်ကိုင်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ခေါ်လာတာလဲ။ အဲ့ဒါပြောပြ
(၁)တစ္ဆေ၊ သူရဲ၊ သင်းကွဲ၊ ပြိတ္တာနှင့် အခြားမကျွှတ် မလွတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပျော်ချင်၊ပါးချင်တယ်ဆိုရင် ဒီသစ်ခက်ပေါ်ကို လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်လာနိုင်ပါ
တယ်။ ဘာညာပေါ့ကွာ အဲ့လိုခေါ်လို့ရတယ်။ ကျန်တာကတော့ မင်းဥာဏ်ရှိသလိုသုံးလို့ရတယ်။ ။ဒါပေမယ့်
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ သူရောက်လာပြီး ခုံနဲ့မေးတဲ့အချိန်တွေမှာ မင်းပျော်ရဲ့လားဆိုတာကို ခဏခဏမေးနေရမယ်။
သူမပျော်ဘူးဆိုရင် ဆက်ပြီးမထားနဲ့တော့၊ နောက်တစ်ကောင်ထပ်ခေါ်ပေါ့၊ ဟုတ်ပြီလား။
"ကဲလစ်ကြရအောင်ကွာ" "မနက်ဖြန်ညကျရင် လူတစ်ယောက်ကို လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီး အပေါ်ကို မပြမယ်
ဟုတ်ပြီလား" "အခုတော့ သွားပြီဟေ"
Posted by ညီနေမင်း at 10:42 PM4comments:
ဒီလင့်လေးကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းနံပါတ်သိတာလေးနှင့် အိမ်လိပ်စာကို တန်းပြီးစုံစမ်းလို့ အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ချို့ဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်တော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်လိပ်စာကို မသိသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုက အရမ်းသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စုံစမ်းစရာမလိုပဲ ဒီလင့်လေးကနေ ရှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေ သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကဲဒီလင့်လေးကို သွားချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ။
အားလုံးပဲ ဒီဆိုက်လေးကို သိချင်တဲ့သူလဲရှိသလို သိပြီးသားလူလဲရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တင်လိုက်တာက မသိသေးတဲ့ သူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုက်လေးကိုလာလည်တဲ့သူတိုင်း သီချင်းတွေကအစ နည်းပညာပိုင်းတွေအဆုံးအားလုံး ရှိစေချင်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်လေးတွေကအစ တင်ပေးနေတာကို အပြစ်မတင်ပဲ ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေဝင်စေချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်ကသိပြီးသားဆိုပေမယ့် မသိရသေးတဲ့ သူများအတွက်တော့ ထူးခြားနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားလျှက် ...
Posted by ညီနေမင်း at 11:04 AM No comments:
Labels: Applications, General ထွေထွေ